ई–पासपोर्ट जारी गर्ने सरकारको तयारी | Diyopost - ओझेलको खबर ई–पासपोर्ट जारी गर्ने सरकारको तयारी | Diyopost - ओझेलको खबर
सोमबार, आश्विन ११, २०७८ | September 27, 2021
कला साहित्यतक्माप्रचण्डप्रेस काउन्सिलमदन भण्डारीमाधव नेपालमिडिया मालिकरामेश्वर थापाविभुषण
ई–पासपोर्ट जारी गर्ने सरकारको तयारी
Diyo post बुधबार, कार्तिक २८, २०७५ | ८:१३:५६
काठमाडौं , कात्तिक २८ । सरकारले दुई वर्षभित्र ई–पासपोर्ट जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सक्दो छिटो प्रक्रिया थाल्न राहदानी विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय असार महिनाको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
पासपोर्ट दुरूपयोग रोक्न ई प्रविधिमा जानुपर्ने राहदानी विभागको निष्कर्षपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । नक्कली नागरिकता बनाएर त्यसकै आधारमा पासपोर्ट बनाउने घटना बढेपछि त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्न ई प्रविधिमा जाने तयारी भएको हो ।
ई–पासपोर्ट एमआरपी जस्तै हो । यसमा थप चिप्स हुन्छ । चिप्समा व्यक्तिगत विवरणसहित आँखाको रेटिना, औंठाछापलगायतका फिचरहरू राखिएको हुन्छ । अत्याधुनिक विमानस्थलमा पासपोर्टधनी र बोक्ने व्यक्ति उही हो वा होइन भन्ने सेन्सर हुने भएकाले यसबाट दुरूपयोग नियन्त्रण हुनेछ ।
२०१० डिसेम्बर २६ मा पहिलोपटक नेपालले एमआरपी जारी गर्दै हस्तलिखित राहदानी क्रमैसँग विस्थापित गरेको थियो । ८ वर्षमा ५७ लाखभन्दा बढी एमआरपी विभागले जारी गरिसकेको छ । दुई पटकको टेन्डरअनुसार कुल ७० लाख एमआरपीमा बाँकी १३ लाख एमआरपी ‘बुक’ छापिन बाँकी छ । त्यो सकिनुअघि नै नयाँ टेन्डरमा ई–पासपोर्टको ‘बुक’ बन्ने राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अन्नपूर्ण पोस्टलाई बताए ।
पासपोर्टको मुख्य आधार नागरिकता नै हो । नागरिकता नक्कली समेत बन्न सक्ने हुँदा सबै व्यक्तिगत विवरण राख्दा व्यक्ति नै उपस्थित हुनपर्ने भएकाले नक्कलीको सम्भावना कम सरकारको निष्कर्ष छ । विदेशमा कुरिअरबाट पठाएर नै राहदानी बनाउने गरेको समेत जानकारी विभागले पाएपछि सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुनैपर्ने परिपत्र गरेको छ ।
पासपोर्ट महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट भएकाले यसलाई सरकारले संवेनदशील ढंगले लिएको हो । मलेसिया, साउदी अरबको रियाद र जेद्दा, युनाइटेट अरब इमिरेट्स ९यूएई०, कुबेत, कतार, हङकङ, अमेरिका ९डिसी र न्युयोर्क० र बेलायतमा ‘लाइभ–इनरोलमेन्ट’ ९प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दर्ता गराउनुपर्ने व्यस्था० छ ।
ती दूतावासहरूले लाइभ इनरोलमेन्टभन्दा बाहिरबाट पनि फाराम पठाइरहेका कारण विभागले लाइभ इनरोलमेन्ट भएको स्थानबाट आवेदन नलिने भन्दै पत्राचार गरेको छ । पछिल्लो समय विदेश स्थित नियोगबाट आउने आवेदनमा दुरूपयोग वा गलत भएको आशंका रहको राहदानी विभागका अधिकारीले बताए ।
कतिपय दूतावासका वरिष्ठ अधिकारीले ‘गरिदिनू म जिम्मेवार’ भन्छन् तर अधिकृतहरूले आशंका रहने हुनाले गर्दैनन् । त्यसमा समेत शक्ति संघर्ष हुने गरेको एक अधिकारीले बताए । हस्तलिखितमा दूतावास र जिल्लाबाट बढी नै दुरूपयोग भएका घटना पहिले धेरैपटक सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
विदेशी नियोगमा अधिकांश पासपोर्टको आवेदन हुलाकमार्फत हुने गरेको छ । हस्तलिखितमा झैं राहदानी बेच्ने कार्य समेत हुन सक्ने भन्दै यसमा अध्ययन हुने गरेको एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै अवस्था नआओस् भन्नका लागि विभाग सचेत रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘एउटाको नागरिकतामा अर्कोको फोटो र विवरण पठाएमा कसरी नियन्त्रण हुन्छ । यसैले व्यक्तिगत उपस्थिति जरुरी छ ।’
कतिपय मुलुकले विदेशमा भएका नागरिकलाई पनि राहदानी बनाउनै घर फर्केर सबै प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको छ । नेपालले विश्वका जुन कुनामा पनि व्यक्ति उपस्थित हुँदै नभै पासपोर्ट उपलब्ध गराउनु अस्वाभाविक भएको विभागको भनाइ छ । एमआरपीबाट मात्रै दुरूपयोग रोक्न सम्भव नभएको भन्दै विभाग छिटोछिटो ई–पासपोर्टमा गएको हो ।
विभिन्न १० मुलुक र राहदानी विभागमा लाइभ इनरोलमेन्ट ९आफैं उपस्थित भएर अनलाइनमा फर्म भर्ने० चलाए पनि विभागबाहेक अन्यत्र पूर्णतः सञ्चालनमा छैन । विदेशमा यसको उपयोग उत्साहजनक नभएको विभागका अधिकारीले बताए । एमआरपीलाई ई–पासपोर्टमा लैजाने तयारीस्वरूप सरकारले तीन वर्षअघि नै लाइभ इनरोलमेन्ट प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ई–पासपोर्ट लाइभ इनरोलमेन्टबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
एमआरपी छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथरले नै लाइभ इनरोलमेन्टका लागि प्रविधि उपलब्ध गराएको छ । उसले अहिलेसम्म आफूले छपाइको जिम्मा लिएको ७० लाख राहदानी बुक बुझाइ सके पनि अन्य प्राविधिक कार्य जारी राख्नेछ ।
सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णयसँगै प्रक्रिया अघि बढाउने भनेअनुरूप नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट समेत पारित गरिसकेको जानकारी विभागलाई दिएको महानिर्देशक खड्काले बताए । परराष्ट्र सचिवसँगको छलफलपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । परराष्ट्र सचिव फ्रान्स र बेलायत भ्रमणमा छन् ।
सुरक्षाका विशेषता थप्दै पासपोर्टलाई बलियो र गर्विलो बनाइने महानिर्देशक खड्काले बताए । दैनिक सात हजारसम्म पासपोर्ट छापेको विभागले अहिले दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा छाप्ने गरेको छ ।बुधबारको अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।
बुधबार, कार्तिक २८, २०७५ | ८:१३:५६
टेलिभिजनमै ओली विरुद्ध जंगिए माधव नेपाल, ‘अर्काको…
कनकमणिको तस्बिर राख्दै बालकृष्ण ढुङ्गेलले लेखे डरलाग्दो…
‘शहिदकी श्रीमती ताक्ने’ भन्दै माधव नेपालले कसलाई…
एनसेल करछलिको पक्षमा लागेपछि रामशरण महतलाई फेसबुकमा…
हजार पटक भन्छु, ‘फेरि युद्ध हुन्छ’ :…
धादिङ कांग्रेसमा पहिरो : महाधिवेशनमा असन्तुष्टि जनाउँदै…
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल नै किर्ते…
श्री लालीगुराँस सहकारीको ‘झूट’ फेरी पराजित :…
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको नेतृत्वमा विवादित व्यक्ति…
लोकप्रिय गायक रमेशराज भट्टराई र गायिका रचना…
धादिङ कांग्रेसमा पहिरो : महाधिवेशनमा असन्तुष्टि जनाउँदै २ दर्जन कार्यकर्ताद्वारा राजिनामा !
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल नै किर्ते सिफारिसको प्रमुख ‘मतियार’ !
श्री लालीगुराँस सहकारीको ‘झूट’ फेरी पराजित : समय् फल्चा निर्माण गर्न उच्च अदालतको आदेश !
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको नेतृत्वमा विवादित व्यक्ति : ५ करोड घोटालादेखि मृगौला तस्करीसम्मको आरोप !
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल नै किर्ते सिफारिसको प्रमुख ‘मतियार’…
श्री लालीगुराँस सहकारीको ‘झूट’ फेरी पराजित : समय् फल्चा निर्माण…
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको नेतृत्वमा विवादित व्यक्ति : ५ करोड…
लोकप्रिय गायक रमेशराज भट्टराई र गायिका रचना रिमालको स्वरमा रहेको…
रामेछापका न्यायाधीश विवादमा : ‘बलात्कारी’ गाउँपालिका अध्यक्षसँग साँठगाँठ गरेको आरोप…
Diyo Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu, Nepal
Editor in chief : Sudip Bishwakarma
Editor: Rita Budhathoki
सम्पर्क नम्बर :+977 01 5705421 | 9810239889
Copyright © 2021 - www.diyopost.com. All rights reserved.